Chingwizi police post burnt – NewsDay Zimbabwe
Previous article When foster-parenting comes to the rescue
Next article Finally, a credit rating service just for SMEs
Zviri kumbofamba sei.
mapurisa zivai kuti you are at war with madzibaba i think its madzibaba Ishmael who burnt the police post mark my words
Lets stop this treacherous behavior, its really sad to note that people are doing things that don’t help with development, what is it that some people want, I hope the culprits are brought to book.
kana mapisa police post ndokuyi manje?
Manifestation of anger over oppression results in targerting of govt structurers and policy implementation brews hostility and a definite chimurenga.Nezuro maida mavhoti kochiratidzai kuti takakuvhoterai nekudhirivhara!
Masvingo as a Province nolonger has political heavyweights.dai vanaMuzenda vanga varivapenyu nyaya yeChingwizi yakapera kare.inhema here?
iweee nyika yaora shamwari mari hakuna nyika irikuraramiswa na tax man(zimra) nyika yataichemera yaita mamvemveeeee…
zanu iri kunyara kutaura kut takundikana hamaa weeee …